बरु लोडसेडिङ्ग आउँछ तर कुलमान आउँदैन – Yug Aahwan Daily
बरु लोडसेडिङ्ग आउँछ तर कुलमान आउँदैन
युग संवाददाता । २७ पुष २०७७, सोमबार १२:०० मा प्रकाशित
उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भन्याजस्तै भाछ हाम्रो सुर्खेताँ विजुली । रायमाझी आउने बित्तिकै भन्दैथे“ नेपाली जनता हो यतिकुरा बुझिराख, बरु लोडसेडिङ्ग आउँछ तर कुलमान आउँदैन“ । हुन पनि तिनले बोल्नु र सुर्खेताँ बत्ति जानुलाई हेर्दा उर्जामन्त्रीले ठिकै भन्या रैछन् जस्तो लायो के । फेरि हामी सुर्खेती कति अभागि के ! बादल लाएनी, घाम लाएनी, झरी परेनी, हावा चलेनी जाने सुर्खेतको बत्तीयाँ लोडसेडिङ्ग नी पैला हुनुपर्ने । अनि विजुलीको हाकिम नी सुर्खेतकै बेबकुफ आउनु पर्ने ? ल हिजो त संघीय ब्यवस्थाथ्यो नेताजति राजधानी बस्थे । त्यै भएर जनताको घराँ विजुली आओस् नआओस् मतलव भएन । तर ऐले त प्रदेशका नेता जतिनी सुर्खेतैमा बस्छन् । अँझ भएन भनेर प्रदेशको राजधानी पनि सुर्खेतै हो । तर पनि ह्याँका मन्त्रीहरूलाई मतलव नहुनु र आँफूकाँ इन्भटर र जेनेटर चलेछि जनता जाय भाँडमे गरेछि सबैभन्दा दुख्ख त त्याँपो ला छ त ।
हिजोसम्म राँको बालेर उज्यालो गराएर बस्या मान्छेहरू मन्त्री भएछि जनताले कुत्ताले नपाउने दुख पाऊँदा रैछन् भन्ने कुरा ऐले आएर राम्रोसँग बुझियो । अनाहकाँ अनसुर्तममा जाने सुर्खेतको बत्तिका बिषयाँ न ह्याँका सिडिओलाई मतलव छ, न प्रदेशका मन्त्रीलाई । आँफुलाई चाईया बेलाँ स्टोर र लेखाकाले इन्भर्टर र जेनेटरको ब्यवस्था गरिहाल्छन् । अनि कुन बेला बत्ति आयो कुनबेला बत्ति गयो तिनरलाई के मतलव । जनता काम गर्न राजनीति गर्या भा पो जनतालाइँ पिर्न हुन्न भन्ने हो । तर राजनीतिलाई पेशा बनाएर बलिको बोको बन्दै कमाउँदै हिँडदै गर्न थालेछि उनरलाई जनताको आवस्यकतासँग के सरोकार ? उनरु त ऐले कसरी सत्ता जोगाउने, सांसद खरिद बिक्री को खेललाई कसरी अघि बढाउने र पाँच बर्ष सरकार चलाएर तीन पुस्ता पुग्ने कमाइ गर्ने त्यत्तिमात्रै चिन्ता छ तिनरलाई ।
त्यसैले हाम्रा लागि संघीयता आउनु र नआउनुमा कुनै फरक छैन । हिजो जुन समस्याँ थिम, आज नी त्यै समस्याँ छम् भनेछि यो संघीयता ले हाम्लाई के देको छ र ? त्यसैले ओलीबा हुन्छ भने हाम्रै लागि भएनी संघियता खारेज गर्दिनोस् । हिजो विकास क्षेत्रको सदरमुकामका नाममा सुशील कोइरालाले हुन देनन । ऐले प्रदेशका नेताको पेलाइमा सुर्खेतेहरलाई हुन नदिने कर्नालीको खेलले सबैतिराट पेलानमा सुर्खेतीहरुनै परिराछन् । ल सरकाराँ त सबै साविक कर्नालीकै आछन् । ५ बर्ष बाध्य भएर सहनुपर्ने भो भन्नेनैथ्यो । तर हाम्रो दुर्भाग्य त होला, विजुलीको हाकिम नी साविक कर्नाली (जुम्ला) कै आएछि त हाम्रो विजोगै भा छ नी । यिनिहरको राज चलुन्जेल सायद हाम्रा दिन यीनै हुन् । जयहोस् ।
मैले त प्रचण्डको अनुहार झल्झल्ती सम्झेँ के !
ओलीबा त निकै फायर भा छन् त हँ
पूर्वेली नारीले दैलेखी ब्यापारीलाई पार ला
नेपाली काँगे्रस अहिले जनतालाई घाँडो भाछ